सीएमसीमा टेष्ट ट्युब बेबी सेन्टर सुरु – Chitwan Post
सीएमसीमा टेष्ट ट्युब बेबी सेन्टर सुरु
प्रकाशित मिति: सोमवार, चैत्र २५, २०७५
प्रमुख समाचार, स्वास्थ्य
उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादव आइतबार भरतपुरस्थित चितवन मेडिकलको अत्याधुनिक प्रजनन संरक्षण सेवा प्रणालीसहित टेष्ट टयूब बेबी सेन्टरको उदघाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै । तस्वीर : सुरेन कुँवर/रासस
भरतपुर । चितवन मेडिकल कलेज (सीएमसी) ले जिल्लामै पहिलोपटक टेष्ट ट्युव बेबी सेन्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले आइतबार बेबी सेन्टर उद्घाटन गरेका छन् । स्त्री तथा प्रसूति विभागअन्तर्गत अत्याधुनिक प्रजनन् संरक्षण सेवा प्रणालीसहितको टेष्ट ट्युब सेन्टर सञ्चालनमा ल्याएको हो । कार्यक्रममा मन्त्री यादवले सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यले स्वास्थ्य क्षेत्रमा परिवर्तन गर्न सकिने बताए ।
कार्यक्रममा पूर्वअर्थमन्त्री एवम् सांसद् सुरेन्द्र पाण्डे, चितवन क्षेत्र नम्बर २ का सांसद् कृष्णभक्त पोखरेल, भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेनु दाहाल, चितवन मेडिकल कलेजका प्रबन्ध निर्देशक हरिशचन्द्र न्यौपाने, अस्पतालका निर्देशक दयाराम लम्साल चितवन मेडिकल कलेजका स्त्री तथा प्रसूति रोग विभागका प्रमुख डा. उपेन्द्र पण्डितलगायतले मन्तव्य दिएका थिए ।
करिब तीन करोड रूपैयाँको लागतमा भित्र्याइएको अत्याधुनिक मेशनमार्फत निः सन्तानपन उपचार गरिने अस्पतालले जनाएको छ । डेढ लाखदेखि दुई लाख ५० हजार रूपैयाँमा निःसन्तानपनको उपचार गरिने अस्पतालको भनाइ छ ।
यसैबीच उपप्रधानमन्त्री स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री यादवले विभिन्न बहानामा चिकित्सकले बिरामीलाई दुःख दिन नपाउने बताएका छन् । आइतबार भरतपुर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले चिकित्सकका माग सङ्घीय निजामती ऐनले समेटिसकेकाले जनतालाई दुःख दिन नपाइने बताए ।
“अरु कुनै मह¤वपूर्ण कुरा छ भने त्यसलाई सरकारले सकारात्मक रुपमा लिन्छ”, उनले भने, “तर विभिन्न मागका नाममा बिरामीलाई दुःख दिन जरूरी छैन ।” समायोजनले चिकित्सकको वृत्तिविकासमा अवरोध सिर्जना हुन्छ, भन्ने भ्रममात्र भएको उनको तर्क छ । “वृत्ति विकास सबैको हुन्छ, यसमा सरकारले कसैलाई पनि रोक्दैन”, उनले भने, “यो रोकेर कहाँ चिकित्सा प्रणाली चल्छ ।” आन्दोलन छाडेर जनताको सेवा र बिरामीको उपचारमा लाग्न उनले चिकित्सकलाई आग्रह गरे ।
चिकित्सकका समस्या सरकारले बुझेको भन्दै उनले चिकित्सकले मागभन्दा पनि सेवालाई आत्मसाथ गर्नुपर्ने धारणा राखे । चितवन मेडिकल कलेज फरक प्रसङ्गमा उनले भने, “तोकेको भन्दा बढी शुल्क लिने र दिने दुवै दोषी हुन्, यसको छानबिन हुन्छ ।” सरकारको मापदण्डअनुसार सबै मेडिकल कलेज चल्नुपर्ने भन्दै उनले यस विषयमा चितवन मेडिकल कलेज प्रशासनसँग पनि कुरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
‘ज्यानमारा’ बाइपास सडक ! साउनयता नौको मृत्यु, २२ घाइते
भरतपुर विमानस्थलको पूर्वी भागमा बिजुलीका तार भूमिगत गराउने तयारी
चितवनबाट एक हजार ६९१ वटा नमुनाको परीक्षण
‘ट्राभल हिस्ट्री’ले भन्छ– ट्रक चढेर भित्रिँदैछ कोरोना !